Ihe kpatara nsogbu na nsogbu dị egwu nke esemokwu data | Martech Zone
Ihe karịrị ọkara nke ndị ahịa niile kwenyere nke ahụ ihe ruru unyi bụ nnukwu ihe mgbochi na iwulite mmemme azụmaahịa gara nke ọma. Enweghị data dị mma ma ọ bụ data ezughị ezu, ị na-efu ikike iji lekọta ma kwurịta okwu na atụmanya gị. N'aka nke ya, nke a nwere oghere na ike gị iji hụ na ị na-egbo mkpa ndị otu ọrịre gị.
Ahịa arụmọrụ bụ akụkụ teknụzụ na-eto eto. Ikike, ya na nnukwu data, iji tụlee atụmanya, gbanwee ha ka ọ na-eduga, ma nye ndị otu na-ere ahịa ezigbo ndu na-adabere na nnukwu data ga-etinye mbọ na mbata gị na mkpọchi, na-akwọ ụgbọala ndị ọzọ.
Mana 60% nke ndị ahịa niile na-ekwu na nchekwa data ha bụ unreliable, 25% kwuo na ọ bụ etịbe na 80% na-ekwu na ha nwere ize ndụ ndekọ kọntaktị ekwentị!
Ihe ruru unyi bu ihe na-egbu ndi mmadu na-ere ahia. Ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe ọjọọ, na - egbochi mmetụta nke ọdịnaya na onyinye dị ukwuu, ma nwee ike itinye akara, aha na ngalaba gị n’ihe egwu (ma ọ bụ njọ). Eleghara akụkọ a na ihe ọ pụtara maka azụmaahịa gị anya na nsogbu gị. Matt Heinz, Onye isi ala nke Heinz Marketing
Jide n'aka iso Matt na iwekota na Twitter. Na 10 am PT / 1pm ET na Feb 19th ha gha enwe TweetChat na isiokwu nke ogo data na February 19th (Hashtags: #dirtydata na #MartechChat). Nchoputa site na Tinye data Index gụnyere:
Oyiri data (15%), abaghị uru ụkpụrụ / ranges (10%) na-efu ubi (8%) bụ ndị kasị juru ebe niile data mma mbipụta.
Nhazi na ezighi ezi, nkwado email ezughị oke na nnabata nnabata adabaghị nke ọma, mana ọ na-esiri ha ike idozi ya; Ọzọkwa, ha dị mkpa mgbe ejikọtara - na-emetụta ụdị si na 5% na SMB, pasent 10 na ụlọ ọrụ na pasent 7 na otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nyochachara na ha anaghị eji sọftụwia na-achịkwa data, ọ ga-adị ha mkpa iji aka ha jide ma dozie njehie data 313,890 nwere njikọ.
Site na ọnụ ahịa B2B na-ebute ihe karịrị $ 50, ozi-e ndị a dara ada na adreesị nkwado ha ga-atụgharị karịa nde $ 2.5 na mmefu mgbasa ozi furu efu.
Tags: craig rosenbergndeksi dataogo datadata quality akpataihe nchoputa dataihe ruru unyiihe ruru unyijikọtaMgbasa ozi ahịamatt heinz
Steeti nke Ahịa akpaaka 2015